पुन: विवाह गर्दै बलिउड हट क्विन ! - बलिउड - साप्ताहिक
तस्बिर : Deesha Chandra
पुन: विवाह गर्दै बलिउड हट क्विन !
सीधा कुरा प्रस्ट विचार । बलिउडकी हट एन्ड सेक्सी अभिनेत्री राखी यस्तै स्वभावकी छिन् । सेक्सका विषयमा प्रश्न सोध्ने हो भने उनी खुलेरै जवाफ दिन्छिन्, हो म भर्जिन छैन तर दुई वर्षदेखि सेक्स गरेकी छैन ।
मिटुको विषयमा पनि उनी स्पष्ट छिन्— अभिनय गर्दा पुरुषबाट धेरै पटक छोइन्छ, यसलाई दुव्र्यवहार भन्नु हुँदैन । कसैले हिरोइनलाई पूजा गरेर राख्न लाखौं खर्चिंदैन । प्रेमको विषयमा पनि उनको विचार प्रस्ट छ— यो सामान्य कुरा हो, प्रेममा नपर्ने त कुरै भएन नि !
खुला दिलकी यी बलिउड सेन्सेसनल अब फेरि एकपटक विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको बताइन्छ । भारतीय मिडियाको भनाइ मान्ने हो भने राखीले यही डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकामा विवाह गर्दैछिन् ।
उनले दीपक कलालसँग विवाह गर्न लागेको बताइएको छ । आफ्नो विवाहको पुष्टि गर्दै दुलाहा–दुलही दुवैले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट निमन्त्रणा कार्डसमेत सेयर गरिसकेका छन् ।
प्रकाशित :मंसिर २६, २०७५
दिन फर्कियो रकुलको
भारतीय अभिनेता गिरीश कर्नाडको निधन